XY Doll-TPE Umzimba wokulinganisa isitya segazi-ii-Urdolls
I-168cm C yeNdebe yeSilicone yeNtloko yoBuso be-Makeup ye-EVO Skeleton Jelly Chest Mo Xiaodi XY
I-Deborah yasimahla ye-EVO skeleton + iJelly Breasts Silicone Head + TPE body XY Doll 148cm D-Cup Amehlo anomtsalane ngamava amathathu + Ubuso be-S Makeup obufana nooDoli bezesondo
Yumi Silicone Head + TPE Umzimba TPE Jelly Breasts XY Doll 148cm D-Cup Facial S Makeup Mahala EVO Skeleton Love onodoli abaThengisiweyo
UMaddison Katie Umfundi oSexy unxiba uBomi bokwenyani ngesondo unodoli weSilicone Intloko + TPE Umzimba we-D-Cup yeSkirt yaseJapan 148CM XY Ubuso bentombazana obuhle
I-158cm yekomityi yobuso be-S yokwakheka kwe-EVO skeleton abicah intloko intyatyambo umthamo omncinci we-XY Doll
Cali 170 CM E -Indebe ye-XY ye-silicone yoBuso obusentloko S Makeup EVO Skeleton Jelly Chest Wheat Umbala we-TPE weSini unodoli
U-Angelina 170 CM E -Indebe ye-XY ye-silicone yoBuso obusentloko S Makeup EVO Skeleton Jelly Chest Wheat Umbala we-TPE weSini unodoli
Harley Naughty170 CM Brown Iinwele E -Indebe XY abicah Intloko Ubuso obulula S Makeup EVO Skeleton Jelly Chest Wheat Umbala TPE Sex Unodoli
UMaggie Amabele amahle 168 CM Amashiya amade eC-Cup XY NO.003 isilicone yoBuso obusentloko S Makeup EVO Skeleton Jelly Breast Skin TPE Sex Doll
Marley 158CM C-Cup XY Doll Silicone Head Face S Makeup EVO Skeleton Jelly Breast Enchanting Skin TPE Sex Doll
Morgan 158CM C-Cup XY No. 004 Silicone Head & Face S Makeup
Jordyn 158 CM C-Cup XY No.
Guadalupe 148CM D-Cup XY Silicone Head Big Tits TPE Sex Doll
Malayah 148CM D-Cup XY Silicone Head Big Tits TPE Sex Doll
Loretta 158CM C-Cup XY Silicone Head Stockings TPE Sex Doll
I-168cm C yeNdebe ye-Silicone yeNtloko yoBuso be-Makeup yeJelly Chest Road Satsuki EVO Skeleton XY Doll
I-168cm C yekomityi yentloko yesiliclic ebusweni S yokwenza i-EVO skeleton jelly chest XY Doll
I-168cm C yekomityi yesilic yentloko ye-EVO skeleton face S yokwenza ijeli yesifuba misa XY Doll
Ubuso S Makeup 168cm C yeNdebe yeSilicone eyiNtloko ye-EVO Skeleton Jelly Chest Chuanxia XY Doll
Intloko yesilicone 152cm ubuso bekomityi S yokwenza i-EVO skeleton i-Shangguantong XY Doll
I-170cm E yekomityi yesilic yentloko kunye nobuso S yokwenza ijeli isifuba isabelEVO skeleton XY Doll
I-170cm yeNdebe ye-Silicone yeNtloko yeJelly yeBele yeNgqolowa ebusweni be-Makeup ye-EVO Skeleton XY Doll
I-168cm C yeNdebe ye-Silicone eyiNtloko ye-Beibei yobuso be-Makeup ye-EVO Skeleton Jelly Chest XY Doll
I-148cm D ikomityi yentloko yesilicone ye-EVO ibele lejeli kunye nobuso be-S makeup XY Doll
I-158cm C yeNdebe ye-Silicone yeNtloko yoBuso be-Makeup ye-EVO Jelly Chest Isakhelo se-XY Doll
I-158cm C yeNdebe ye-Silicone yeNtloko ye-Skeleton Jelly Bust Face S Makeup EVO XY Doll
I-158cm C yeNdebe yeJelly Chest yeSilicone eyiNtloko yoBuso be-Makeup ye-EVO Skeleton XY Doll
I-170cm yeNdebe ye-Silicone yeNtloko ye-EVO Skeleton Jelly Breast Umbala wobuso S Makeup XY Doll
I-170cm yeNdebe yobuso be-S ebusweni i-EVO Skeleton Jelly Chest Ingqolowa yeSilicone iNtloko yeXY Doll
Intloko yesilicone 170cm E indebe yobuso be-S yokwenza i-EVO skeleton jelly chest XY Doll
I-148cm D yeNdebe yobuso be-Makeup ye-EVO Skeleton Jelly Chest Silicone Head XY Doll
I-152cm indebe ye-EVO skeleton silicone entloko kunye nobuso S makeup XY Doll
I-168cm C yeNdebe ye-EVO Skeleton Jelly Chest Abicah Intloko yobuso S Makeup XY Doll
Usebenzisa i-Makeup yoMzimba oPheleleyo kunye neMizimba yeGazi yokwenyani kuDoli we-XY
I-XY Doll yimveliso eyaziwayo kwihlabathi. Iziko lomsebenzi wophawu lwaphesheya liseShenzhen, eTshayina. XY Oonodoli bezesondo nguvulindlela kunye nenkokeli ye-silicone intloko + i-TPE yokulinganisa imithambo yegazi. Yamkela itekhnoloji yokubumba yokwenyani ukuphinda imodeli yokwenyani yomzimba 1: 1 ngokuthungwa kwesikhumba. Iinkcukacha zisengqiqweni ngakumbi unodoli wesondo, ukufuna iinkcukacha ezigqibeleleyo, ukwakheka kobuso kusulungekiswa ngakumbi kwaye kulinganisiwe, umzimba upeyintiwe, kwaye wonke umzimba wokwakheka wamkelwa kunye nemithambo yegazi yokwenyani + imigca yesikhumba.
Unodoli we-XY ungomnye waBavelisi boonodoli bothando obuchwephesha
The XY unodoli wokwenyani idibanisa izinto ezimbini ezahlukeneyo, abicah kunye TPE. Umzimba kunye nentloko zenziwe ngezinto ezahlukeneyo ezikumgangatho ophezulu, ukwenzela ukuba zinike umdlalo opheleleyo kwiinzuzo zabo. Intloko yenziwe ngezinto eziphezulu ze-silicone ukuqinisekisa ukuba uyilo lwentloko yokwenyani lubuyiselwa kwinqanaba elikhulu. Abayili bonodoli bothando lokwenyani basebenzisa oonodoli besondo be-tpe ukuthamba komzimba.
Oonodoli bezesondo abakumgangatho ophezulu othengiswa kwi-Intanethi
XY oonodoli ngokwesondo ngokwenyani zi-ethe-ethe, zi-surreal kwaye zibhetyebhetye, zibenza ibe yeyona ndlela isebenzayo ye-porn kubomi bakho bokwabelana ngesondo. Thenga i-XY Doll ye-Sex Dolls kwivenkile ye-urdolls kwaye uya kufumana iidoli zesondo eziphezulu.
Igama lebrand:XY unodoli
Intshayelelo: I-XY Doll isebenzisa ipolymer ephezulu kakhulu kunye neoyile emhlophe ekumgangatho we-cosmetic, engenalo ivumba elikhethekileyo, ukumelana neinyembezi, ukumelana nemozulu kunye nokusebenza kolawulo lweoyile. Isakhelo seXY Doll sisebenzisa imigangatho ephezulu yentsimbi esemgangathweni yesizwe, kwaye amalungu adityaniswa neefaskiti zentsimbi emsulwa. Ukwandiswa kwe-Thermal kunye nokusebenza ngokuncipha kuzinzile; Ubume bomzimba we-XY Dol: yamkela inkqubo yokwenziwa kobomi bokwenyani, i-1 ukuya kwi-1 ikopi yomzimba wobomi bokwenyani, enesikhumba, iinkcukacha ziyinyani ngakumbi, kunye nokufuna iinkcukacha ezigqibeleleyo.
+ Umgangatho ophezulu we-TPE weSondo oDibeneyo + Ukulinganisa kweVenkile yegazi
+ Khuphela iModeli yokwenyani
141cm XY unodoli
148cm XY unodoli
152cm XY unodoli
158cm XY unodoli
168cm XY unodoli
170cm XY unodoli